ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာ လိင်အလုပ်သမ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး | ဧရာဝတီ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာ လိင်အလုပ်သမ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး
ဧရာဝတီ| December 26, 2012 | Hits:1,174
| | ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် စံခလဘူရီမြို့တွင် လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာမိန်းကလေး ၁၈ ဦးကို ယနေ့တွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ထိုင်းသတင်းများအရ သိရသည်။ ယခု ဖမ်းဆီးခံရသော မိန်းကလေး ၁၈ ဦးထဲတွင် အသက် ၂၀ အောက် အရွယ် ၃ ဦး ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထိုင်းဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Daily News အွန်လိုင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အာဏာပိုင်များက လိင်ပျော်ပါး လိုသူများ ဟန်ဆောင်၍ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> mg mg December 26, 2012 - 9:05 pm	လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာ ဘာတွေပြောမလည်းစောင့်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်….
Reply	wayinntote December 28, 2012 - 1:27 pm	Pyaw parr pee ma phann tar lar?
Reply	shinekoko February 6, 2013 - 2:17 am	yes